Fanagadrana olona Misy mizana tsindrian'ila ?
Iavoloha Nifoaka miaramilan’ny Capsat ilay fiara
Fiara iray nirifatra niazo iny lalam-pirenena fahafito iny no nifaoka miaramila iray niambina ny sakana ara-pahasalamana teny Iavoloha afaka omaly Talata alina, tokony ho tamin’ny 09 ora.
Fitaterana an-dranomasina Hovelomina indray ny seranan-tsambon’i Ehoala
Maro ireo ezaka tsy maintsy hirosoana hanatsarana ny sehatra fitaterana araka ny nambaran’ny minisitry ny Fitaterana,
Antananarivo renivohitra Mifandramatra ny Taxi sy ny kaominina
Mihenjan-droa ny tany eo amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny fiara karetsaka.
Lalam-pirenena faha-5 Taxi-brousse sy tuk tuk tratra nitondra zaza amam-behivavy
Fiara taxi-brousse sy tuk-tuk, tsy misy mpandeha fa feno entana no mandalo teo amin'ny sakana ara-pahasalamana tany amin’ny lalam-pirenena fahadimy omaly raha hihazo an’i Vavantenina.
Air Madagascar Nahemotra indray ny fiverenan’ny sidina iraisam-pirenena
Notohizana ny fiatoan’ny sidina an’habakabaka ho an’ny Kaompania Air Madagascar na efa nisy aza ny vina famerenana ny sidina maro iraisam-pirenena miditra sy mivoaka an’I Madagasikara.
Maroantsetra Naverin-dàlana ilay fiaramanidina
Niainga omaly ireo mpandeha tamina fiaramanidina madinika niaraka tamin'ny mpanamory hihazo an'i Maroantsetra.
Matsiatra Ambony Mitaky ny hanokafana ny lalana ireo kaoperativa nasionaly
Nandritra ny fanolorana fanampiana azy ireo, avy amin'ny Governoran’ny faritra no nanambaran'ireo tompon’andraikitry ny fitanterana nasionaly sy rezionaly any an-toerana fa vonona hanaraka ny fitsipika
Mpamily namono olona teny tsarasaotra lalambaovao Nahazo fahafahana vonjimaika Nahazo fahafahana vonjimaika ilay mpamily fiara tsy mataho dalana 4.4 marika V8 namono nahafaty teo no hoe mpitaingina bisikileta teny amin ny lalam-baovao,
Tsarasaotra ny alakamisy 16 aprily tamin'ny 9ora maraina. Ny sabotsy 18 aprily anefa izy dia nahazo fahafahana vonjy maika. Ny mpanao gazetin' ny Valosoa Alphine Helisoa kosa nolazaina fa nanompa filoha na tsy izy aza no nanao izany, in-telo nangataka fahafahana vonjimaika fa mbola migadra ihany. Sady mananonentana anefa izy no mamelon-janaka ary tsy salama. Sao dia mba misy mizana tsindrian'ila e ?